Soomaliya – Page 11 – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
September 19, 2019 marqaan 0
Somaliland oo markale taageero umuujisay Sucuudiga “Weerarkii shirkadaha shidaalka”.
September 19, 2019 marqaan 4
Wasaaradda Arrimaha Dibedda Somaliland Oo War Ka Soo Saartay Weerarkii Loo Gaystay Shirkadaha Shiidalka Sucuudiga Xukuumadda Somaliland ayaa sheegtay in ay ka xun tahay weerarkii lagu qaaday goobo Shidaalka laga qodo oo ku yaalla waddanka […]
September 18, 2019 marqaan 6
September 18, 2019 marqaan 0
Taliska Africom ayaa war ka soo saaray duqeyn shalay diyaaradaha dagaalka Mareykanka ay ka fuliyeen gobolka Jubbada Hoose ee K/ Soomaaliya. Duqeynta oo aheyd mid xoogan ayaa Africom waxaa sheegtay in ay ka dhacday waqooyi […]
Ugu yaraan 3 qof ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhaawacmeen kaddib markii Gaari ay wateen miino kula kacday inta u dhaxeysa Jaamacadda Shabeelle iyo Degaanka Tabeellaha. Qaraxa ayaa lala beegsaday Injineer Turki ah oo […]
September 18, 2019 marqaan 2
September 18, 2019 Ali Osman 0
September 17, 2019 marqaan 0
Saansaan colaadeed oo cusub ayaa ka taagan magaalada Kismaayo ee xarunta Jubaland, taasi oo u dhaxeysay saddexda madaxweyne ee isku haysta hoggaanka maamulka Jubaland. Wararka aan ka heleyno magaalada ayaa sheegaya in siyaasiyiinta Cabdirashiid Xidig […]
September 17, 2019 marqaan 5
Maleeshiyaad weerar aan horay loo arag ku qaaday saaldhig ay dagan yihiin Alshabaab.
September 17, 2019 marqaan 1
Malayshiyada macawisley ayaa dagaal joogta ah ku qaada xarada Shabaab meelaha ay kaga sugan yihiin Gobolka Hiiran iyo Shabeelaha dhexe. Maqriibkii shalay galab ayaa kooxdan macawisley la baxday waxay weerar ku Ekeeyeem deegaan lagu magacaabo […]
Fanaan caan ka ahaa dalalka Carabta oo ay Somalia kujirto oo la xaqiijiyay inuu geeriyooday.
Allaha u naxariistee waxaa geeriyooday fannaakii caanka ahaa ee reer Suudan Salaax Ibnul baadiya oo si weyn looga yaqaanay qeybo ka mid ah caalamka gaar ahaan dalal ka tirsan afrika iyo Asia. Salaax oo ka […]
Madaxweynaha Soomaaliya maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Soo Xiray Shirwynaha Dib-U-Heshiisiinta Galmudug ee uu dhawaan dhuusamareeb ka daah furay Raiisal wasaare Xasan Cali Khayre.
September 17, 2019 Ali Osman 0
Dhacdadii lagu burburiyey labo kamid ah Ilaha ugu waa weyn ee Dhaqaalaha Sacuudiga waxaa sare u kacday arrimaha ku saabsan khatarta cabsida dagaal ee laga qabi karro isku dhac hubeysan oo dhexmara dalalka Iiraan & […]
September 17, 2019 Ali Osman 2
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo soo xiray Shirka Dib-u-heshiisiinta Galmudug ayaa ku dhawaaqay in loo gudbay wajigii labaad ee qorshaha dhammaystirka dhismaha maamul mideysan oo hana qaada, kana tarjuma hiigsiga iyo himilada […]
DEG DEG: Xildhibaan Xidig oo si adag ugu hanjabay Axmed Madoobe.
September 16, 2019 Ali Osman 5
Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo sheegay in 22kii bisha August loo doortay Madaxweynaha Jubbaland ayaa maanta si rasmi ah uga jawaabay hanjabaad dhawaan ka timi Axmed Madoobe oo isna dib loo doortay isla 22kii August […]
September 16, 2019 marqaan 10
Ciidamo katirsan Dowladda ayaa si rasmi ah albaabada isugu laabay Xarunta Radio Daljir ee Boosaaso, Sida ay xaqiijiyeen qaar kamid ah howlawadeenada Xarunta. Xalay ayay ahayd markii maamulka daljir uu sheegay in ciidamo aan wadan […]
September 16, 2019 Ali Osman 0
DAAWO: Soomaaliya oo joojisay Saldhigii Milateriga Berbera & Wararkii u dambeeyey dalka.
September 16, 2019 Ali Osman 10
Ilo Wareedyo aad ugu dhaw Madaxtooyada Soomaaliya ayaa daaha ka rogaya in la amray in la xadido qaadashada ama bixinta Baasaboorka Diblumaasiga ah ee dalka, oo ay inta badan wataan madaxda dawladda, shaqsiyaadka dawlad gobaleedyada […]
September 16, 2019 marqaan 0
Degmada Boocame ee Gobolka Sool 6 Bisha 10 aad ee fooda inaku soo haysa waxaa lagu qaban doonaa Shir loogu Magacdaray Shirka Iyo Allebariga Dhalinyarada SSC ee Gobolada Sool,Sanaag iyo Cayn. Shirka oo sida qorshuhu […]
Magalada Muqdisho Gaar ahaan xafada Via_Rooma Ka Dhacday Arintii ugu yaabka badneyd . Sawir kani waa Yamani Shiikh cumar Waana wiil dhalinyaro ah, 22sano jir, Markiisii horena ka yimid wadanka Yamen . Asli daud warsame […]